Irlandy, miandry ny EU amin'ny "Apple case" | Avy amin'ny mac aho
Miverina amin'ny vesatry ny hetra aloan'i Apple izahay na tsy mandoa ny asany amin'ny EU. Ary antenaina fa eo anelanelan'ny volana septambra sy oktobra dia hisy fifanarahana hotanterahina amin'ny vaomiera eropeana momba an'io. Raha ny filazan'ny minisitry ny fitantanam-bola Irlanda ihany (izay misy ny foibeny eoropeana, ho an'ny hetra), Michael Noonan, ary hoy ny Reuters:
«Ny kaomisera misahana ny fifaninanana ao amin'ny Vondrona Eropeana, Margrethe Vestager, dia nilaza tamiko fa tsy hisy fanapahan-kevitra hentitra amin'ity volana Jolay ity, fa ny fanapahan-kevitra dia mety ho tonga alohan'ny fahalavoana. Ny antenaiko dia apetraka amin'ny volana septambra na amin'ny voalohan'ny volana oktobra »
Apple dia voampanga, toy ny orinasa iraisam-pirenena marobe toa ny Google na Yahoo, ny Ny hetra any amin'ny firenena heverina ho toeram-pialofana hetra noho ny taha ambany amin'ny hetra ampiharina amin'ny asan'izy ireo any an-toerana, ho takalon'ny famoronana asa marobe ao amin'ny firenena, fifanarahana iray izay azo heverina ho fanampiana ara-panjakana tsy ara-dalàna. Ny orinasa Cupertino dia miasa miaraka amin'ireo sampana marobe mba hampihena be ny hetra ivelan'i Etazonia, ahazoana tombony hatramin'ny 2/3 amin'ireo vola miditra ao amin'ny kaontinanta taloha.
Noho izany, ny tombom-barotra azo teo anelanelan'ny taona 2004 sy 2012 avy amin'ny orinasa paoma (tarehimarika mahatratra 64,1 miliara dolara eo ho eo) dia mety iharan'ny haba 12.5%, mifanohitra amin'ny 2% amin'izao fotoana izao izay ampiharina, ary amin'izany toe-javatra izany dia tokony ho $ 8 miliara amin'ny hetra afara.
Apple, amin'ny lafiny iray, dia manizingizina fa izy io iray amin'ireo mpandray anjara lehibe indrindra manerantany ary mandoa ny isan-jaton'ny hetra tokony haloany na aiza na aiza no apetraka ny marika, ambanin'ny lalàna ankehitriny an'ny firenena tsirairay avy.
Ity fanapahan-kevitra ity dia efa nahemotra satria antenaina ny hisian'ny fifanarahana amin'ity faramparan'ny 2015 ity, saingy ny fangatahana avy amin'ny Vondrona Eropeana ho an'ny fanampim-panazavana momba an'io dia nanosika ny fanadihadiana 2016 fanemorana ny didim-pitsarana farany.
Apple dia iray amin'ireo orinasa marobe ao a toe-javatra mitovy amin'izany, toy ny tsitoha Google, McDonald ary IKEA, ankoatra ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Irlandy, miandry ny EU amin'ny "raharaha Apple"